RW Saacid oo sheegay in sharciga lala tiigsan doono cidii dishay Xildhibaan Faysal (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 7, 2013 2:49 b 0
Muqdisho, December 7, 2013 – Caasimada Soomaaliya waxaa maanta lagu aasay marxuum Xildhiibaan Maxamed Warsame Faysal oo shalay lagu qarxiyey meel ku dhow xaruunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, aaska waxaa ka qayb-galay ra?isal wasaaraha KMG ah Cabdi faarax shirdoon iyo masuuliyiin kale.
Ra?isal wasaare Shirdoon oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay baaris dheer ku samayn doonto cida ka dambaysay dilkii Xildhibaan Faysal, isagoo ku dhawaaqay in maxkamad la soo taagi doono.
Xildhibaano ka tirsan baarlamanka ayaa shaki ka muujiyey cida ka dambaysay dilka Xildhibaanka ee shalay lagu qarxiyey Muqdisho, waxaana qaarkood ay sheegeen in ay noqon karto arrintu mid siyaasaddeed maadama dhowaan la galay marxalad adag.
Xildhibaan Cabdiqafaar Maxamed Omar oo ka mid ah mudanayaasha ay isku fikrada ahaayeen aadkana isugu dhowaayeen dhanka siyaasadda ayaa tilmaamay in kooxda Al-shabaab aysan weli ka hadlin dilkaas, halka awal ay xili horeba saxaafada ka qiran jireen dilka masuuliyiinta iyo xildhibaanada.
Maxamed Warsame Faysal waxaa uu ahaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamanka Soomaaliya, qarax loogu rakibay gaarigiisa ayaa ku dilay Muqdisho shalay goor duhuradii ah isagoo marayey meel ku dhow xaruunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Dhegeyso: -? Xildhibaan Cabdiqafaar Oomaar oo u waramay Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tisan